Maraykanka oo u qabtay 72 saacadood diblumaasiyiin Ruush ah inay uga baxaan dalkiisa! | kowtharmedia.com
Home WARAR Maraykanka oo u qabtay 72 saacadood diblumaasiyiin Ruush ah inay uga baxaan dalkiisa!
Maraykanka oo u qabtay 72 saacadood diblumaasiyiin Ruush ah inay uga baxaan dalkiisa!
Dowlada Maraykanka ayaa ku amartay 35 diblumaasi in ay isaga baxaan dalka Maraykanka iyadoo Maraykanka uu ku tilmaamay diblumaasiyiintaas inay farogelin ku sameeyeen doorashadii Madaxweynaha dalka Maraykanka.
Sidoo kale waxaa la amray in albaabada loo laabo labo xarun oo dowlada Ruushka ku lahayd magaalooyinka Maryland iyo New York kuwaasoo la sheegay in loo isticmaalayay soo ururinta xogaha dalka Maraykanka.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa dhowaan sheegay in uu talaabo adag ka qaadi doono dowlada Ruushka kadib markii lagu eedeeyay in ay ku lug lahayd in la jabsado ololaha xisbiga Dimuqraadiga iyo ololihii ay waday musharixii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Hase yeeshee dowlada Ruushka ayaa beenisay inay wax lug ah ku leedahay eedeymaha loo soo jeediyay ee ah in ay farogelisay doorashada dalka Maraykanka.
Wasaarada Arrimaha Dibada Maraykanka ayaa shaacisay in 35ka diblumaasi oo ka howlgalaayay safaarada Ruushku ku laheed magaalada Washington DC iyo qunsuliyada Ruushka ee magaalada San Francisco, diblumaasiyiintaa iyo qoysaskooda ayaa loo qabtay muddo 72 saacadood inay ugaga baxaan dalka Maraykanka.
Dowlada Ruushka ayaa la filayaa inay falkaan ugaga jawaabto mid la mid ah oo ay dalkeeda kaga eriso diblumaasiyiin Maraykan ah. Talaabadan uu ku dhaqaaqay Madaxweyne Obama ayaa waxaa dhaliilay xisbiga Jamhuuriga iyagoo ku tilmaamay mid muujineysa daciifnimada dowlada Maraykanka ee dhinaca diblumaasiyada gaar ahaan dalka Ruushka.
Previous PostDaawo: Cadaani oo Radio ka Baahiyey Nin Sheegay inuu Dili doono Hadalkaas oo Hurdo u Diiday! Next PostTaliska AMISOM oo ka hadlay sawirro beryahan si weyn u qabsaday baraha bulshada Soomaalida!